» “चोलेन्द्र,सँग, विनोद चौधरी,भन्दा धेरै,सम्पति, रहेको खु’लासा,कहाँ लुकाएर’राखेका छ्न त? “चोलेन्द्र,सँग, विनोद चौधरी,भन्दा धेरै,सम्पति, रहेको खु’लासा,कहाँ लुकाएर’राखेका छ्न त? – हाम्रो खबर
“चोलेन्द्र,सँग, विनोद चौधरी,भन्दा धेरै,सम्पति, रहेको खु’लासा,कहाँ लुकाएर’राखेका छ्न त?
“काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग धनाढ्य विनाद चौधरीको भन्दा बढी भएको खुलासा भएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा रहेको बताए।बरिष्ठ ,अधिवक्ता डा. त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीकै शैली अपनाएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भने,‘हिजो ओलीले पनि भिजेलान्ते प्रयोग गरेकै हो।
“अहिले ओलीकै शैली, चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपनाएका छन् ।चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक केही पनि होईन् । उहाँसँग रचनात्मक दिमाग छैन् ।’ उनले बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न ढिलो गरेको टिप्पणी गरे ।उनले भने,‘जब उहाँ असंवैधानिक रुपमा बोलाईएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो, त्यतिबेला नै मैले, उहाँको राजीनामा मागेको थिएँ। म त निरन्तर बोल्दै आएको छु। बारले आन्दोलनमा ढिलाई गर्यो, यो सत्य हो।
आज सोमबार रिपोर्टर्स क्लब, नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउ भनेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा भने संविधानतः असफल भैसकेको दाबी गरे।उनले भने–‘संविधानको धारा १३६ अनुसार उहाँ प्रभावकारी ,ढंगले कामकारबाही सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा असफल हुनुभयो । उहाँ बेञ्च तोकनुहुन्छ, तर सहकर्मी न्यायाधीशहरु बहिष्कार गर्नुहुन्छ, उहाँ असक्षम भैसक्नुभयो।”
“अब कुन संविधानअनुसार ,प्रधानन्यायधीश हुनुहुन्छ ? उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्नुभएन। तपाईँलाई अब संविधानको धारा १३६ ले नै चिन्न छोडिसक्यो। तपाईँ यसैपनि पदमुक्त हुनुभयो।उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी परिचालन गर्नुभयो। भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुभएको छ। यत्रो, हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सीमा परेपछि संसारमा कुनै पनि प्रधानन्याधीश पदमा बस्दैनन्।
“प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्ने, राजदूत र संवैधानिक निकायमा भाग खोज्छ र ? संविधान र विधिको शासनको रक्षक, हुनुपर्ने होईन ?आम नागरिक जनताको शीर निहुरिएको छ। उहाँले त संस्थाको अपमान गर्नुभयो।मयर्दामाथि अपमान गर्नुभयो। अदालतमा प्रहरी र शक्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो अदालतको अवहेलना हो। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको आरोप फेश गर्ने क्षमता नभएर, शक्तिको सहारा लिएको पनि आरोप लगाए।”
“उनले भने,‘हिजो ज्ञानेन्द्रले, पनि कु गरेका थिए, सेना परिचालन गरेका थिए। उनी समाप्त भए ।त्यो बेलामा पनि प्रतिकार समिति बनाईएको थियो । हाम्रो आन्दोलन सत्य र नैतिकतामा आधारित छ।यसको नैतिक शक्ति छ। उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो। अहिलेको आन्दोलन सेवाग्राहीको लागि हो। न्यायालयमा, न्याय किनबेच गरिनुहुँदैन्। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले माओवादी केन्द्रका,
“अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्नु नै अशोभनीय भएको सुना। उनले भने,‘यही आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्छ। पद त्याग गनुपर्ने एक हजार कारण छन्।उहाँ त हिजो, संसद् विघटनको बेलामा पनि बेन्चमा अल्पमतमा पर्नुभयो। एक्सपोज हुनबाट रोक्नको लागि फरक मत राख्नुभएन,। उहाँको चलेको भए दुवैपटक संसद् पूनःस्थापना हुँदैन थियो।”
“तेस्तै,अन्ततः सर्वोच्च अदालतका, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरले सर्वोच्च अदालत छोडेका छन् । बहस गर्न इजलासमा बसेका जबराले बाहिर आन्दोलन चर्किदै गएपछि अदालत छोडेका हुन्। राजीनामाको दवाव झेलिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत छोडेर बाहिरिएका हुन् ।नेपाल ,बार र सहकर्मी न्यायाधीशहरूको चर्को विरोधकाबीच अदालत उपस्थित भएर मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आएका जबरा बारको ,निषेध आन्दोलन घोषणालगत्तै अदालतबाट बाहिरिएका हुन्।
शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा प्रहरी हस्त,क्षेप गराएर आन्दोलन कमजोर पार्न खोजेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिचौलियाको नाइके भन्दै भोलि शुक्रबारबाट अदालत प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको छ।धर्ना विथोलिएपछि नेपाल बार परिसरमा बोल्दै सर्वोच्च अदालत बार ,एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भोलि सर्वोच्च अ,दालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न नदिने आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए।
“जबरा अदालतबाट बाहिरि,एपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भने बुधबार पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। जबराले बुधवारका लागि नौवटा इजलास गठन गर्दै १७७ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए।तर, न्यायाधीशहरू भने, जबरासँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका विवादमा सुनुवाइ नगर्ने अडानमा कायम छन् ।अदालत छोडेपनि उनले आफू कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने ,बताउँदै आएका छन्।